Mugabe Granted Immunity, Assured Of Safety In Zimbabwe – The Publisher Online
The aging former president was “rugged and drained” by events of the past week and may travel to Singapore for medical checks in the coming weeks, the source said. He had been due to leave for the Southeast Asian country in mid-November before the military put him under house arrest.
Mugabe has maintained that he leads a frugal life and that he does not possess any wealth or properties outside Zimbabwe. Addressing a cheering crowd in Harare on Wednesday night, Mnangagwa said Zimbabwe was entering a new stage of democracy.
His own human rights record also stirs hostility in many Zimbabweans. Mnangagwa was Mugabe’s state security minister in the 1980s.